Apple inoenderera kumberi uye inotangisa beta 4 ye macOS High Sierra yevagadziri | Ndinobva mac
Apple inoenderera kumberi uye inoburitsa macOS Yakakwira Sierra beta 4 yevagadziri
Uye ndeyekuti vhiki rimwe chete iri (Muvhuro wapfuura chaizvo) vhezheni 3 yevagadziri yakasvika uye panguva ino vatangisa beta 4. Iyo nyowani vhezheni ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.2 beta 4 inosvika nekuvaka 17C79a uye inowedzera zvakajairika bug fixes, system kugadzikana kugadzirisa uye mhinduro dzemabhugi anowanikwa mune yapfuura vhezheni.
Hatisi kunyanyo shamisika kuti tine maviri beta vhezheni muvhiki imwechete sezvo chiri chinhu chakaitwa naApple kare uye chiri kuita kazhinji kazhinji nguva pfupi yadarika. MacOS Yakakwira Sierra beta 4 inosvika yoga, hapana imwe vhezheni yeiyo dzakasiyana OS yakaburitswa nhasi.
Rangarira kuti idzi beta shanduro ndedzevagadziri uye kuti chinhu chakanakisa mune zvese zviitiko kugara kure navo sezvo zvichikonzera kusapindirana nechero maturusi edu ebasa kana mashandisiro atinoshandisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Chero zvazvingaitika, zviri nani kumirira kana kuisa veta beta mukati meveruzhinji beta chirongwa uyezve kana zvichikwanisika paMac isiri iyo yebasa rezuva nezuva, sezvo nhau dziri shoma uye haina kukodzera kuomesa ne beta. ..
Sezvakaitika pazviitiko zvakapfuura iyo nyowani beta vhezheni yakaburitswa haitsanangure iyo nhau inosanganisirwa mune ino gadziriso, asi kana paine chero nyaya yakakosha ikaonekwa mumaawa mashoma anotevera atinofanira kuratidza, isu tichagadzirisa ino chinyorwa. Ichokwadi ndechekuti kunze kwekuitwa kweiyo emoji nyowani uye mhinduro yekuchengetedzeka kweWPA 2 yakatangwa mushanduro yapfuura, hapana zvishoma zvekuratidzira padanho rekuona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inoenderera kumberi uye inoburitsa macOS Yakakwira Sierra beta 4 yevagadziri
9x10 Podcast: Matambudziko kana Kuwedzeredza?
Apple yakafunga se "Muenzaniso Wekambani" mukutenga zvigadzirwa zvakagadzirwa muAfrica